Shixnad hub ah oo garoonka Ballidoogle xalay uga soo degtay dowladda KMG
Saanad hub ah oo lagu siday diyaarad ayaa xalay uga soo degtay dowladda KMG ah garoonka diyaaradaha Ballidoogle oo bilahanba u xirnaa is haysad ka dhex aloosan maliishiyooyinka ka taliya garoonka. Hubka, waxaa lagu soo qaaday 12 gawaarida qaada xamuulka, iyadoo ay galbinayeen 30 gaari oo kuwa tiknikada ee dagaalka ah.
Lama oga halka lagu dejiyey hubka iyo meesha uu ka yimid, hase ahaatee warar milateriga quseeya ayaa caddeynaya in laga keenay saddex dal oo aan la carrabaabin. Saraakiil ka tirsan dowladda KMG waxa ay ii sheegeen in shixnado kale ay jidka ku soo jiraan.
Gawaaridii saanaddu ku rarnayd markii ay soo gaareen agagaarka Ex. Koontarool waxaa rasaas ku furay maliishiyooyin ay u tiillay jidgooyo halkaas. Wax dhimasho ah lama soo sheegin, laakiinse laba nin oo ka tirsanaa ciidammadii shixnadda la socday ayaa ku dhaawacmay halkaas.
Dhinaca kale, saddex ruux ayaa naftoodii ku waayey, afar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray dagaal maanta gelinkii hore ku dhex maray degmada Kaaraan maliishiyooyin u kala daacad ah hoggaamiye kooxeedka Muuse Suudi iyo Cabdiraxmaan Shifti oo ah siyaasi horey La-taliye ugu ahaan jiray hoggaamiye kooxeedkii siyaasadda ka fariistay, Cali Mahdi Maxamed.
Dagaalka oo ka billowday canshuur uu Muuse Suudi toddobaadkan ku soo rogay suuqa degmada Kaaraan waxa uu anfariir ku riday dadkii deggenaa goobihii lagu diriray.
Dadka ka ganacsada suuqa iyo maliishiyada Cabdiraxmaan Shifti ayaa si adag uga soo horjeeda canshuurtan. Sarkaal u hadlay kooxda Muuse Suudi waxa uu beeniyey in dagaalku uu dhex maray maliishiyadooda iyo maliishiyada Cabdiraxmaan Shifti.
Waxa uu sheegay in maliishiyooyin iyaga ka tirsan ay isku dheceen. Ma ahan markii ugu horreysay ee maliishiyooyinka labada nin ay dagaal isaga hor yimaaddaan.